मंसिर २१, २०७८ ०७:०६:५९
गर्भवती श्रीमतीसंग यौन सम्पर्क राख्नुस् , श्रीमती तृप्त हुन्छिन् चैत्र १, २०७६
यसरी याैन सम्पर्क गर्दा गर्भ रहदैन माघ १९, २०७६
तपाईलाई थाहा छ ? यौन सम्पर्कका बेला महिलाहरुले यी १५ कुरा सोच्छन् माघ १७, २०७६
चिसोमा खानुस् कोदोको ढिँडो, स्वास्थ्यमा पुग्छ यस्तो फाइदा कोदोको रोटी तथा ढिँडो नखाने नेपाली कम नै होलान् । पुष ३, २०७६
जाडो मौसममा कस्तो किसिमको खाना खाने ? जाडो मौसम शुरु भइसकेको छ । शरीरले न्यानो र तातो खानेकुरा खोज्न थालिसकेको छ । चिसो मौसममा शरीरलाई स्वस्थ राख्न खानापानमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । मंसिर २९, २०७६
यौन सम्बन्धपछि किन चाडै निदाउँछन् पुरुष ? यस्ता छन् महिलाले सोच्ने १२ कुरा महिला र पुरुषबीच शारीरिक सम्बन्ध भइसकेपछि कतिपय पुरुषहरु तुरुन्तै निदाउँने गर्छन् भने कतिपय महिलाहरुमा त्यसको असर २४ घण्टासम्म देखिने गर्छ । मंसिर २९, २०७६